Susan Atkins ခေါ် Sadie မဲ Glutz - Manson မိသားစုအဖွဲ့ဝင်
Manson မိသားစုအဖွဲ့ဝင်ဆူ Atkins ရှာရုန်တိတ်သတ်ခဲ့သလား
ခေါ်ဆူ Denise Atkins Sadie မဲ Glutz
Susan Denise Atkins ခေါ် Sadie မဲ Glutz ၏ဟောင်းတစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ချားလ်စ် Manson "မိသားစု" ။ သူမသည်၏ညှနျကွားမှုအောကျတှငျအကြောင်း, တစ်ဦးက Grand ဂျူရီမတိုင်မီကျိန်ဆို ချာလီ Manson သူမကအသေသတ်ခြင်းကိုမင်းသမီး Sharon ကိုတိတ်ဓားဖြင့်ထိုးနှင့်ဂီတဆရာဂယ်ရီ Hinman ၏လူသတ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ခမ်းနားဂျူရီသက်သေခံချက်စဉ်အတွင်း Atkins သူမက Manson အဘို့ပြုမယ်လို့အဘယ်အရာကိုမျှမကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သူမသညျယရှေုဖြစ်ဖို့သူ့ကိုယုံကြည် "အစဉ်အမြဲငါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြပါပြီတစ်ခုတည်းသောပြီးပြည့်စုံသောယောက်ျားသည်" ရှိကွောငျးကိုသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။
Susan Denise Atkins ကို San Gabriel, California မှာမေလ 7, 1948 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Atkins 15 တုန်းကသူ့မိခင်ကင်ဆာအနိစ္စရောက်လေ၏။ Atkins နှင့်သူမ၏အရက်ဖခင်အဆက်မပြတ်စကားများရန်ဖြစ်ကြသည်နှင့် Atkins ကျောင်းမှနုတ်ထွက်နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိယုံကြည်မှုများနှင့်သုံးယောက်ကျူးလွန်လက်နက်ကိုင်လုယက်မှုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နှစ်ခုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဖမ်းမိတဲ့အခါ, Atkins ထောင်ဒဏ်သုံးလကိုပြု၏, ပြီးတော့သူမ topless ခုန်တက် ယူ. မိမိကိုယ်ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများရောင်းချဘယ်မှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့ပြန်သွား၏။
Atkins Manson တွေ့ဆုံ
သူကသူမနထေိုငျခဲ့သညျရှိရာဆက်သွယ်ရေးလည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါ Atkins 32 နှစ်အရွယ်ချားလ်စ် Manson, ဟောင်းအပြစ်တင်အဆိုပါ grubby တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည် Manson အားဖြင့် mesmerized နှင့်တက်ထုပ်ပိုးဖြစ်လာတယ်အုပ်စုနှင့်အတူခရီးထွက်, နောက်ဆုံးမှာ Spahn Movie, Ranch မှာတက်အဆုံးသတ်။ ချာလီ Atkins, Sadie Glutz အမည်ပြောင်း, သူ Manson ရဲ့သဘောတရားတစ်ခု မှစ. ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောအုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်ကမကထဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိသားစုဝင်များအကြာတွင် Manson ရဲ့အကြီးမားဆုံးပရိသတ်ထဲကတစ်ဦးအဖြစ် Atkins ဖော်ပြခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 1968 ခုနှစ်တွင် Sadie ကောင်လေးတစ်ယောက်မွေးဖွားခဲ့တယ်နှင့်သူ့ကို Zezozecee Zadfrack အမည်ရှိ။ မိခင်များ Manson မှသူမ၏ဆည်းကပ်သက်သေပြဖို့ Sadie ရဲ့အလိုဆန္ဒနှေးခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါမိသားစု orgies ရှိခြင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်နေတာဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ကုန်နှင့် Mason ဆိုနားထောင်ပြီး "ဒပါး" လူဖြူဆန့်ကျင်လူမည်းတစ်လူမျိုးရေးစစ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမယ်လို့အခါအနီးအနာဂတ်အတွက်အချိန်အကြောင်းကို prophesize ။
သူကမိသားစုအချိုပွဲအောက်မှာဝှက်ထားမယ်လို့နှင့်လူမည်းအောင်ပွဲကွှေးကျွောတစ်ချိန်ကသူတို့ထို့နောက်သူတို့၏လူမျိုးသစ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန် Manson မှဖွင့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
ဇူလိုင်လ 1969 ခုနှစ်, Manson, Atkins, မာရိ Brunner နဲ့ Robert Beausoleil စွပ်စွဲအုပ်စုမကောင်းတဲ့ LSD ကိုရောင်းခဲ့တဲ့ဂီတဆရာနှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဂယ်ရီ Hinman ၏အိမ်သို့သွား၏။ သူတို့ကနောက်ကျောကသူတို့ပိုက်ဆံချင်တယ်။ Hinman ငြင်းပယ်သောအခါ Manson တစ်ဦးသည်ထားနှင့် Hinman ရဲ့နားရွက်ပြတ်လိုက်သည်ကိုနှင့်အိမ်တော်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျန်ရှိနေသေးသောမိသားစုဝင်များသုံးရက်သေနတ်အချက်မှာ Hinman ကျင်းပခဲ့တယ်။ Beausoleil ထို့နောက် Hinman ဓားဖြင့်ထိုးအပေါင်းတို့နှင့်သုံးသူ့ကို suffocating အလှည့်ကိုယူ။ ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ, Atkins သည်သူ၏မြို့ရိုးပေါ်မှာသွေးထဲတွင် "နိုင်ငံရေး piggy" ရေးသားခဲ့သည်။
Manson လျှောက်လူမည်းကိုကူညီပေးဖို့သတ်ဖြတ်မှုများကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဒါလူမျိုးရေးစစ်ပွဲ, လျင်မြန်စွာအလုံအလောက်ဖြစ်ပျက်မခံခဲ့ရပါဘူး။ သြဂုတ်လ Manson ခုနှစ်တွင် "Tex" Watson, Atkins ကိုစလှေတျ ပက်ထရီရှာ Krenwinkel နှင့် လင်ဒါ Kasabian ရှာရုန်တိတ်၏အိမ်သို့။ သူတို့ကအိမ်ထဲသို့ဝင်နှင့်ရှစ်လကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုတိတ်နှင့်သူမ၏ဧည့်သည်များအပေါငျးတို့သထဝိုင်းပါတယ်။ တစ်ဦးအသတ်ခံရမှုစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းတွင်, တိတ်ဖြစ်ပြီးကျန်အသေသတ်ခြင်းကိုသတ်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်စကားလုံးက "ဝက်" ဟုအဆိုပါအိမ်ရဲ့အိမ်ရှေ့တံခါးကိုအပေါ်ကိုတိတ်ရဲ့သွေး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်။
အဆိုပါ LaBianca လူသတ်မှု
နောက်တစ်နေ့ညနေ မိသားစုဝင်များ Manson အပါအဝင် Leno နှင့် Rosemary LaBianca ၏အိမျသို့ဝငျ။
Atkins အဆိုပါ LaBianca အိမျသို့မလိုက်မသွားခဲ့ဘူးပေမယ့်အစားသရုပ်ဆောင် Saladin Nader ၏အိမ်သို့ Kasabian နှင့်စတီဗင် Grogan နှင့်အတူစေလွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ Kasabian အမှတ်တမဲ့မှားတိုက်ခန်းတံခါးကိုလာခေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အုပ်စု Nader ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့အခြား Manson အဖွဲ့ဝင်များ LaBianca စုံတွဲ butchering နှင့်အိမ်၏နံရံအပေါ်၎င်းတို့၏လက်မှတ်အသွေးသည်စကားလုံးများကို scrawling အလုပ်များဖြစ်ကြသည်။
အောက်တိုဘာလ 1969 ခုနှစ်, မရဏချိုင့်ထဲမှာ Barker Ranch ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်နှင့်မိသားစုဝင်များမီးရှို့မှုများအတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အကျဉ်းထောင်မှာနေစဉ်, Kathryn Lutesinger အဆိုပါ Hinman လူသတ်မှုအတွက် Atkins ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။ Atkins အခြားအကျဉ်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသူမတိတ်အတွက်မိသားစုရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းကိုဆဲလ်အိမ်ထောင်ဖက်မှမျးတငျကြောင်းရှိခဲ့သည် LaBianca လူသတ်မှု ။ သတင်းအချက်အလက်များရဲကျော်လှည့်ခဲ့သည်နှင့်အ Manson, Watson, Krenwinkel အဖမ်းခံခဲ့ပြီးရမ်းသူ၏ဘယ်မှာမသိရခဲ့ကြသည် Kasabian များအတွက်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Atkins နဲ့ Grand ဂျူရီ
Atkins သေဒဏ်ရှောင်ရှားရန်မျှော်လင့်နေတဲ့ Los Angeles မြို့က Grand ဂျူရီမတိုင်မီသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ သူမကသူမ၏နှင့်ကလေး၏အသက်အဘို့တောင်းပန်အဖြစ်သူမရှာရုန်တိတ်ဆင်းကျင်းပပုံကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူမသည် "ငါသည်သင်ကသေဆုံးသွားပါတယ်နှငျ့သငျကအကြောင်းလုပျနိုငျဘာမှမရှိဘူးပါပဲ။ သင့်အကြောင်းအရာတစုံတခုဂရုမစိုက်ပါဘူး, ခွေး, ကြည့်ပါ။ " သူမတိတ်ပြောသည်ဘယ်လိုပြန်ပြောပြ ပိုပြီးဆင်းရဲခက်ခဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်အခြားသူများအားသေသည်အထိတိတ်သတ်ဖြတ်ပယ်ကျင်းပ, ပြီးတော့သူမထွက်ဟုခေါ်တွင်နေစဉ်အတွင်းသူမ၏မိခင်အဘို့အကြိမ်ကြိမ်သူမ၏ထိုး။ Atkins အကြာတွင်သူမ၏သက်သေခံချက် recanted ။
အဆိုပါ Manson ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်
Atkins တစ်ကျိန် ဆို. ပူဇော် Masonite အဖြစ်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှပြန်လာ, Manson, Krenwinkel နှင့်အတူကြိုးစားခဲ့ခဲ့သည် ဗန် Houten သည့်ကိုတိတ်-LaBianca အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းဘို့ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု။ အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်ဟာသူတို့ရဲ့နဖူးပေါ်တစ်ဦး X ကိုထွင်းထုနှင့်သူတို့၏သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသမိမိတို့ခေါင်းပေါ်ရိတ်နှင့်အဆက်မပြတ်တရားခွင်၌နှောင့်အယှက်။ 1971 ခုနှစ်မတ်လမှာတော့အုပ်စုလူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးသေဒဏ်။ အဆိုပါပြည်နယ်နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးဘဝကိုဝါကျဖို့သေဒဏ်မှောက်။ Atkins အမျိုးသမီးများနေ့များအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအင်စတီကျုမှကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Atkins က "ကုန်းချောတတ်"
Atkins ထောင်ထဲမှာ၌ပါသောပထမဦးဆုံးနှစ်ပေါင်းများစွာသူမ Manson အပေါ်သစ္စာရှိနေဆဲပေမယ့်ကုန်းချောတတ်ဖြစ်ခြင်းအခြားမိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကဝိုင်းပယ်ထားသလိုခံစားရတယ်။ 1974 ခုနှစ်တွင် Atkins ခရစ်တော်ထံသို့မိမိအသက်ကျော်လှည့်ခဲ့သူဟောင်းတဦးအဖွဲ့ဝင်, ဘရုစ် Davis က, နဲ့စာအဆက်အသွယ်။ ခရစ်တော်အားသူမ၏ဆဲလ်ထဲမှာသူ့ထံသို့ လာ. နှင့်သူမ၏အပြစ်ကိုလွှတ်ခဲ့ကြောင်းသူကို Atkins, တစ်ဦးမွေးဖွား-နောက်တဖန်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1977 ခုနှစ်တွင်သူမနှင့်စာရေးဆရာဘော့ Slosser စာတနျသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးသူငယ်များ၏သူမ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိအမည်ရကလေးရေးသားခဲ့သည်။
Atkins '' ပထမဦးစွာအိမ်ထောင်ရေး
မေးလ်စာပေးစာယူမှတဆင့်သူမ "သန်းကြွယ်သူဌေး" Donald Laisure တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ 1981 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Atkins မကြာမီ Laisure မတိုင်မီ 35 ကြိမ်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုလိမ်ညာခြင်းနှင့်ချက်ချင်းသူ့ကိုကွာရှင်းခဲ့ကွောငျးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Atkins စံပြအကျဉ်းသားအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ကြီးဌာနကဖွဲ့စည်းကာ Associates မှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ 1987 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ 2000 လြှို့ဝှကျစကားကြားနာမှာသူမ၏ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးဟားဗတ်ဥပဒေကျောင်းသား, ယာကုပ် Whitehouse, လက်ထပ်ခဲ့သည်။
1991 ခုနှစ်တွင်သူ Hinson နှင့်ကိုတိတ်လူသတ်မှုကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ပေမယ့်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးဖျောသူမရဲ့အစောပိုင်းသက်သေခံချက် recanted ။ ဒါဟာသူမ၏လြှို့ဝှကျစကားကြားနာနေစဉ်အတွင်းသူမမနောင်တမရာဇဝတ်မှုများအတွက်သူမ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်တာဝန်လက်ခံဖို့စိတ်အားထက်သန်ပြသခဲ့ပြီးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ သူမသည်လြှို့ဝှကျစကား 10 ကြိမ်အဘို့ဆင်းလှည့်ပြီ။
2003 ခုနှစ်တွင်သူမအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Grey က Davis ကအားလုံးနီးပါးလူသတ်သမားများအဘို့အလြှို့ဝှကျစကားဆန့်ကျင်သည်သူ၏မူဝါဒအပွိုတရားစွဲသူမ၏နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖန်ဆင်းတော်မူပြီပေမယ့်သူမ၏အသနားခံစာကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
UPDATE: စက်တင်ဘာလ 25, 2009 တွင်, Susan Atkins ထောင်ထဲမှာနံရံများကိုနောက်ကွယ်မှဦးနှောက်ကင်ဆာအနိစ္စရောက်လေ၏။ သူမသေဆုံးသူမအိမ်တွင်သေဆုံးနိုင်အောင်ပါရိုးဘုတ်အဖွဲ့အကျဉ်းထောင်ကနေတစ်ဦးဝိုင်းတော်သားတို့ကဲ့သို့လွှတ်ပေးရန်သူမ၏တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ 23 ရက်အကြာမှာလာ၏။
ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ: အဆိုပါ Manson မိသားစုဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်
Bob ကမာဖီအားဖြင့်သဲကန္တာရ Shadows
ဗင်းဆင့် Bugliosi နှင့် Curt Gentry ဖွငျ့ဒပါး
Bradley Steffens အားဖြင့်ချားလ်စ် Manson များ၏စမ်းသပ်
အဆိုပါ Peterson စီရင်ချက်: အထူးအခြေအနေများ
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Parricide ၏စိတ်ပညာ
ရှေ့တော်သွင်း Corpus တစ်ခုစာချွန်တော်ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ Bream မျိုးစိတ်သစ်: Sunfish, Bluegills, Shellcracker, Warmouth နှင့်ပို
NSA ကအတိုကောက် PRISM အဘယ်အရာသည်ရပ်ပါသလား?
ကယ်လ်ဆီယမ်သည် Periodic table တွင်အဘယ်မှာတွေ့ပါသလား
Franciscan တက္ကသိုလ် Steubenville ၏အဆင့်လက်ခံရေး
TaylorMade M2 ​​ဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်: မိသားစုများတွင်ယာဉ်မောင်း, Fairways, ကယ်ဆယ်ရေး, သံ
အရမ်းမကြာခင်မှာပဲ Gone ခဲ့ဖျက်သိမ်းကာတွန်းများ
ယင်းဆယ်စုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 လှုပ်ရှားမှု, Movies,
နွေဦးရာသီမိုးလေဝသများအတွက်အသင့်ဖြစ်ပြီလားသူကားအဘယ်သူ5ဘုရား
SUNY အယ်လ်ဘာနီ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အကြွင်းမဲ့အာဏာ Beginner အင်္ဂလိပ် - တချို့ကသို့မဟုတ်မဆို
'ဒေါ်။ Dalloway '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အားလျော့ Poker တှငျအဘယျအဓိပ်ပာပါသလား?